Fampielezan-kevitra gaboraraka: tsy hita izay tena fampiharan-dalàna | NewsMada
Fampielezan-kevitra gaboraraka: tsy hita izay tena fampiharan-dalàna
Mandeha ny fampielezan-kevitra. Ao anatin’ny gaboraraka be ihany? Tsy hita izay tena fampiharan-dalàna…
Ny tsy fanaovana fanambarana mialoha ny toerana sy fotoana hanaovana ny hetsika amin’ny fampielezan-kevitra, na filaharambe izany na fiara mitanjozotra. Izay no lazain’ny eo anivon’ny Ceni fa anisan’ny tsy fanarahan-dalàna hita amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka izao.
Eo ihany koa ny fametahana peta-drindrina amin’ny toerana tsy tokony hametrahana izany, ny tsy fanendrena mpitantan-mbola amin’ny fiatrehana ny fifidianana… Mby aiza ny fampiharan-dalàna amin’izany rehetra izany? Tsy hita be ihany… Efa mba nisy ve, ohatra, ny fampitandremana ireo kandidà sy ny mpomba azy mivantana amin’ny fametahana peta-drindrina eny rehetra eny? Na trano na tambohon’olona io, na andrin-jiro… Mba nisy fahazon-dalàna amin’ny tompony?
Amin’izao fampielezan-kevitra gaboraraka izao, amin’izay lafiny izay fotsiny, ohatra: vao mainka misaritaka sy maloto ny tanàna, efa tsy madio sy milamina loatra hatramin’izay. Manampy trotraka ny tsy firaharahana tsotra izao: maika ny ho voafidy fotsiny ny sasany?
Mbola resaka no betsaka
Raha misy, ohatra, ny tena fampiharan-dalàna: tsy efa mba nampitandrina mivantana tokoa ny kandidà na ny mpomba azy tompon’ireny peta-drindrina amin’ny fifidianana mandoto tanàna ireny ve ny eo anivon’ny Ceni. Farafaharatsiny ahay, rehefa tsy manala azy ny tompony fa atao efa nisy aza, ohatra, ny fampitandremana ny amin’ny tokony hanala azy ireny: tsy tokony hanala ireny peta-drindrina eran’ny tanàna ireny ve ny Ceni, manasazy amin’ny alalan’ny lamandy ary afa-manakarama olona hanao izay fanadiovana izay?
Folo andro izay ny fampielezan-kevitra ary saika isan’andro ny fampitandremana ny amin’ny tsy fanarahan-dalàna, raha ny amin’ny fametahana peta-drindrina fotsiny, ohatra. Nefa tsy hita izay fiovana… Ahina mbola hitombo aza ny fahalotoana sy ny fisaritahan’ny tanàna atsy ho atsy, fa ny hihamahery vaika ny fampielezan-kevitra. Tena misy ny kandidà maika sy dotra ny ho voafidy, ka manao ny tsy fanao.
Ahoana koa ny amin’ny filaharambe sy fiara mitanjozotra miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana indraindray? Toy izany koa ny amin’ny tsy fanendrena mpitantam-bola amin’ny fiatrehana izao fifidianana izao: tsy ampy antsasa-manila amin’ireo kandidà 810. Mbola fotoana fampitandremana sy fampahatsiahivana lalàna ihany ve izao amin’ireo hoe mirotsaka ho mpanao lalàna? Mila fampiharan-dalàna amin’izay…